Caafimaadka: Saameynta maskaxda ee porn | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Caafimaadka Saameynta maskaxda ee Porn
Cudurka faafa ee loo yaqaan 'Covid-19' waxaa loola jeedaa in dadka adduunka oo dhan ay haysato walwal badan oo ka timaadda isbeddelka iyo hubin la'aanta uu fayrasku ku keenayo nolol maalmeedkeenna. Qaar badan waxay u jeestaan ​​filimada qaawan si ay u dejiyaan walaacooda ama niyad jabka, ama ay u helaan xoogaa raaxo deg deg ah. Warshadaha luuqada badan ee balaayiinta doolarka ah ayaa ka faa’iideysanaya dad aad u badan oo caajis dareemaya inta ay guriga ku xayiran yihiin waxayna si bilaash ah u helayaan boggaga lacagta lagu bixiyo si ay u dhiiri geliyaan isticmaalka Caqabada jirta ayaa ah in hagaajinta degdegga ah ay badanaa leedahay khataro qarsoon, sida ku tiirsanaanta tartiib tartiib ah oo u horseedi karta adeegsiga dhibaatada iyo xitaa qabatinka qaar. Bogagga soo socda ayaa kaa caawin doona inaad si dheeraad ah uga feejignaato halista iyo waxa aad sameyn karto si aad u adeegsato habab fiican oo lagula qabsado waqtigan. Waxa ugu dambeeya ee aad ubaahantahay waxaa kujira culeys iyo raaxo daro aad iskaga ilaalin laheyd macluumaad faa iido leh goor hore.
Halkan waxaa ah labo xigashooyin waxtar leh oo la tixgelinayo markii laga fekerayo saameynta porno ee caafimaadka maskaxda:
"Dhammaan waxqabadyada internetka, porno ayaa leh awoodda ugu badan ee lagu noqon karo balwad," Dhakhaatiirta neerfaha ee reer Holland ayaa leh Meerkerk et al. 2006
“Noloshaadu waxay isbadashaa markaad aqoon shaqo oo maskaxdaada ah leedahay. Dembiga ayay ka qaadaysaa isla'egta marka aad garato inay jirto aasaas nafley ah oo ku saabsan arrimaha shucuurta qaarkood, ayuu yidhi dhakhtarka dhimirka Dr John Ratey, (Hordhaca buugga "Spark!").
Kahor intaanan faahfaahin dheeri ah ka bixin dhibaatooyinka maskaxda ee isticmaalka sigaarka waqti kadib, aan xasuusano sababta ay muhiim u tahay in laga hortago. Muuqaalka internetka ayaa xakameynaya rabitaanka iyo ku qanacsanaanta nolosha dhabta ah, xiriirka galmada. Taasi waa musiibo maadaama jacaylka galmada iyo isu dhawaanshaha ay ka mid yihiin waaya aragnimada ugu wanaagsan ee aan ku heli karno bani aadam ahaan.
Barashada Saameynta Porn
Barashadan ku saabsan saameynta porn-ka ee maskaxda ayaa ahayd qodobka kaliya ee ugu muhiimsan ee ka caawiya dadka inay ka adkaadaan noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka maskaxda iyo jir ahaaneed ee ka yimaada isticmaalka sigaarka. Ilaa hadda, way jiraan Daraasadaha 85 taas oo ku xirta caafimaadka maskaxda iyo shucuurta liidata ee isticmaalka sigaarka. Saameyntani waxay u dhexeeyaan ceeryaanta maskaxda iyo welwelka bulshada illaa iyo niyad-jabka, muuqaalka jirka oo xun iyo dib u soo noqosho. Cunno xumida, oo ku soo kordhaysa dhalinyarada, waxay sababtaa dhimasho ka badan cudurrada kale ee dhimirka. Porn-ku wuxuu saameyn weyn ku leeyahay fikradaha ku habboon ee muuqaalka jirka.
Xitaa seddex saacadood oo khaniisiin ah usbuucii ayaa sababi kara in la dareemo yareynta arrimaha cawlan meelaha muhiimka ah ee maskaxda. Marka isku xirnaanta maskaxda ay ku lug leedahay, waxay ka dhigan tahay inay saameyn ku yeeshaan dhaqanka iyo niyadda. Fara-gelinta joogtada ah ee lebbiska internetka ee adag ayaa u horseedi karta qaar ka mid ah dadka isticmaala dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda, isticmaalka qasabka ah, xitaa qabatinka. Kuwani waxay faragelin weyn ku hayaan nolol maalmeedka iyo yoolalka nolosha. Isticmaalayaasha badanaa waxay ka hadlaan dareemida 'kabuubyo' xagga raaxada maalinlaha ah.
Fiiri fiidiyowgan 5-ta daqiiqo ah halka a neurosurgeon wuxuu sharxayaa isbeddelada maskaxda. Waa tan a link cilmi baarista ugu weyn iyo daraasadaha ku saabsan caafimaadka maskaxda iyo shucuurta saboolka ah, iyo natiijooyinka garashada garashada (fekerka) liita. Natiijooyinkani waxay saameeyaan awoodda adeegsadaha inuu si wanaagsan ugu guuleysto dugsiga, kuleejka ama shaqada. Eeg our BILAASH qorshooyinka casharka dugsiyadu inay ka caawiyaan ardayda inay ka digtoonaadaan dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee ka imanaya ladagaalanka fayoobaanta iyo awooda ay ku gaadhaan dugsiga.
In kasta oo kufsiga porn-ka waqti ka dib, laftiisa, u horseedi karto dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda, dadka qaarkood waxay la kulmeen jahwareer noloshooda waxayna u isticmaalaan porno si ay is dejiyaan. Xaaladahaas oo kale, dadku waxay u baahan yihiin caawimaad si ay ula soo xiriiraan jidhkooda si ay uga caawiyaan inay maareeyaan dhacdooyinka naxdinta leh ee ka dhigaya inay ku xaniban yihiin habab la-qabsasho aan habboonayn. Waxaan kugula talin lahayn buuga takhtar iyo cilmi-baare cilmi-baare Bessel van der Kolk,Jidhku Wuxuu Hayaa Dhibcaha”Oo xarunteedu tahay USA. Waxaa jira fiidiyowyo wanaagsan oo isaga la socda oo ka hadlaya YouTube oo ka hadlaya noocyo kala duwan oo dhaawac ah iyo maskax kala duwan (maskaxda limbic) daaweynta taasi wax ku ool ah. Midkan wuxuu ku talinayaa awoodda yoga sida daaweynta noocaas ah. Midkan kooban oo uu ka hadlayo kalinimo iyo xaalad jahwareer maskaxeed kadib. Halkan ayuu ka hadlayaa jahwareer iyo lifaaq. Midkani wuxuu la xiriiraa naxdinta ay dad badani dareemayaan natiijada ka dhalatay masiibo, COVID19. Waxaa ka buuxa talo caqli badan.
Liistada hoose waxay dejineysaa saameynta ugu weyn ee ay arkeen xirfadlayaasha daryeelka caafimaad iyo adoo ku soo celinaya isticmaaleyaasha boggaga bogsashada sida NoFap iyo Dib-u-dhiska. Astaamo badan lama dareemo ilaa adeegsigu joojiyo dhowr toddobaad.
Dulmarka Halista Porn
Caadada qaawan ee sawir-qaaduhu waxay leedahay awood u leh inay sababaan dhibaatooyinka soo socda:
ka laabashada howlaha bulshada
horumarinta nolol qarsoodi ah
been u sheegashada iyo khiyaanada dadka kale
doorashada porn dadka
xanaaq iyo niyad jab
la kulanka isbedelka niyadda
walaac qalloocan iyo cabsi
Dareemid awood la'aan xagga laxiriirta galmada
Galmo galmada dadka kale
in dadka loola dhaqmo sidii shay
Xukunka dadka marka hore marka loo eego qaybaha jirkooda
ixtiraam la'aanta baahiyaha dadka kale ee gaarka ah iyo badbaadada
inaad ka feejignaato dabeecada waxyeelada galmada
Ku lug lahaanshaha dhaqan khatar ah
galaangal u galmooda shaqada ama iskuulka
galaangalka sawirrada xadgudubka carruurta
kaqaybqaadashada sharafdarrada, xadgudubka, rabshadaha, ama fal galmo dembiyeed
soo saarista, qeybinta ama iibinta porn
ku lug lahaanshaha galmo aan amaan aheyn iyo galmo waxyeelo leh
Lamaanaha aan wada faraxsaneyn
cilaaqaadka waxaa curyaamiyay daacadnimo iyo khiyaano ku saabsan adeegsiga galmada
lammaanuhu wuxuu u arkaa guurka inuu yahay gaalnimo ie "khiyaamo"
lammaanaha ayaa sii kordhaya xanaaqa iyo xanaaqa
cilaaqaadka ayaa xumaanaya kalsoonida iyo ixtiraam la’aanta awgeed
lammaane wuxuu ka walaacsan yahay daryeelka carruurta
lammaanaha wuxuu dareemayaa galmo in uusan ku filneyn oo uu hanjabayo
luminta isku xirnaanta shucuureed iyo raaxeysiga galmada
luminta xiisaha galmada ee lammaanaha dhabta ah
adkaanta in la xanuujiyo iyo / ama in la gaadho firfircoonida galmada la'aan
fikradaha is dhexgalka, khayaaliga, iyo sawirada qaawan waqtiga galmada
Noqoshada galmada ama ku adkaato galmo
dhibaato ka haysato xidhiidhka jacaylka iyo daryeelka galmada
Dareen galmo ah oo aan xakameyn iyo khasab
danta korodhay ee qatarta, sharaf xumada, xadgudubka, iyo / ama galmada sharci darrada ah
Ku qanacsanaanta galmada
Cudurrada galmada - awood la'aanta uur-ku-jirka, dhiigbax baxa, wasakh la'aan
dareenka ka go'ida qiyamka qofka, waxa la aaminsan yahay iyo yoolalka
luminta sharaf shaqsiyadeed
dareenka joogtada ah ee eedda iyo ceebta
dareenka ay xukumaan porn
Dayacaada meelaha muhiimka ah ee nolosha
caafimaadka qofka (hurdo xumo, daal, iyo daryeel xumo liidata)
nolosha qoyska (dayacaad lamaanaha, caruurta, xayawaanka rabaayadda ah iyo mas'uuliyadaha qoyska)
shaqada iyo waxqabadka dugsiga (diiradda lasaaray, waxsoosaarka, iyo horumarka)
dhaqaalaha (kharashaadka ku baxa majaajillada
cibaado ahaanta (ka fogaanta iimaanka iyo camalka ruuxiga ah)
ubaahan porn si xoog leh oo joogto ah
adkaanshaha xakameynta fikradaha, ama u-bandhigista, iyo adeegsiga sinada
awood la'aanta ah in la joojiyo adeegsiga porn in kasta oo cawaaqib xumo ay ka dhalan karto
ku guuldareysiga soo noqnoqda si loo joojiyo isticmaalka porn
ubaahan waxyaabo badan oo xad dhaaf ah ama cabsi xoog leh siilka si loogu helo saameyn la mid ah (calaamadaha caado)
la kulmida raaxo-daro iyo xanaaq marka laga xayuubiyo astaamaha
Liiska kore waxaa laga soo qaatay buugga “The Trap Trap”Waxaa qoray Wendy Malz. Hoos ka fiiri taageerada cilmi baarista.
"Kuleylka xilliga" iyo Dembiga Galmada
Daraasaddan xiisaha leh “Kuleylka xilliga: Saameynta kicinta galmada ee go'aan qaadashada", Natiijooyinka waxay muujinayaan in" soo jiidashada xarakaatka ay soo jeedinayso kacsiga galmada inay tahay wax kordhiye noocyo ah "ragga da'da yar…
“Saameynta labaad ee waxyaabahayagu waa in dadku u muuqdaan inay leeyihiin kaliya aragti kooban oo ku saabsan saameynta kicinta galmada ee xukunadooda iyo dhaqankooda. Qaddarintaas oo kale waxay muhiim u noqon kartaa go'aan shaqsiyeed iyo mid bulsho labadaba.
“Means habka ugu wax ku oolsan ee is-xakamaynta waxaa laga yaabaa inaysan ahayn awood (taas oo muujisay inay waxtarkeedu xadidan yahay), laakiin laga fogaado xaaladaha uu qofku kici doono oo uu lumiyo xakameyntiisa. Guuldarro kasta oo lagu qiimeeyo saameynta kicinta galmada ee dabeecadda qofka waxay u badan tahay inay horseeddo tallaabooyin aan ku filneyn si looga fogaado xaaladaha noocaas ah. Sidoo kale, haddii dadku aad uga fiirsadaan suurtagalnimada galmo, waxay u badan tahay inay ku fashilmaan inay sameeyaan taxaddarro lagu xaddidayo waxyeellada ka dhalan karta kulammada noocaas ah. Dhallinta isku duubta '' maya dhaha, '' tusaale ahaan, waxay dareemi karaan inay tahay wax aan loo baahnayn in la keeno cinjirka galmada taariikh, sidaas darteedna waxay si weyn u kordhinaysaa suuragalnimada uur ama gudbinta STD-da haddii isagu / iyadu ay ku dhammaato kuleylka xilligan.
Isla caqligaas ayaa shaqsi ahaan loo adeegsadaa. Hadday dadku xukumaan dabeecadaha kuwa kale ee suurtogalka ah ee ku saleysan u fiirsashadooda marka aysan galmo kicin, oo ay ku guuldareystaan ​​inay qiimeeyaan saameynta kacsiga galmada, markaa waxay u badan tahay inay layaabaan lama filaan dabeecadda kale markay kacsan tahay. Qaabka noocan oo kale ah ayaa si fudud gacan uga geysan kara taariikhda-kufsiga. Runtii, waxay abuuri kartaa xaalad qalloocan oo dadka ugu yar ee soo jiidashadooda taariikhihiisu ay u badan tahay inay la kulmaan kufsi taariikhda ah maxaa yeelay iyaga oo aan is-baraarujin waxay gabi ahaanba ku fashilmaan inay fahmaan ama saadaaliyaan dabeecadda qofka kale (kacsan).
Isku soo wada duuboo, daraasada hada socota waxay muujineysaa in kacsiga galmada uu dadka ku waxyeeleeyo siyaabo qoto dheer. Tani waa inaysan layaab ku noqon dadka badankood ee khibrad shaqsiyadeed u leh kacsiga galmada, laakiin baaxadda saameyntu si kastaba ha noqotee waa mid naxdin leh. Heer wax ku ool ah, natiijooyinkayagu waxay soo jeedinayaan in dadaallada lagu dhiirrigelinayo nabadgelyada, galmada anshaxa ay tahay inay xoogga saarto diyaarinta dadka si ay ula tacaalaan '' kuleylka xilligan '' ama looga fogaado marka ay u badan tahay inay u horseeddo dhaqan is-burburin ah. Dadaallada is-xakamaynta ee ku lug leh cayriin doonaya (Baumeister & Vohs, 2003) waxay u egtahay inaysan waxtar laheyn wajiga garashada garashada iyo isbadalka dhiiranaanta leh ee kicinta kicisa. ”
Eeg hadalka TEDx ee Dan Ariely on is Control.
Balwadda - saamaynta hurdada, shaqada, cilaaqaadka
Saamaynta ugu weyn ee daawashada filimka internetka ee aadka u badan ama xitaa ciyaaraha waa sida ay u saameyso hurdada. Dadku waxay ku dhammaadaan 'da' iyo daalan 'oo aan awoodin inay xoogga saaraan maalinta ku xigta. Qaniinyada joogtada ah iyo raadinta abaalgudka dopamine-ka, ayaa kuu horseedi kara caado qoto dheer oo ay adag tahay in laad laadadka. Waxay kaloo sababi kartaa barashada 'cudurada' qaab ahaan qabatinka. Taasi waa marka adeegsadehu sii wado inuu raadsado walax ama waxqabad inkasta oo cawaaqib xumo - sida dhibaatooyinka shaqada, guriga, cilaaqaadka iwm. Tani waxay dib ugu celisaa iyaga marar badan si ay isugu dayaan una soo celiyaan dareenka kacsiga. Maandooriyuhu wuxuu bilaabmi karaa marka la isku dayayo inuu la qabsado cadaadis, laakiin sidoo kale waxay u keentaa isticmaale inuu dareemo culeys sidoo kale. Waa wareegga xun.
Markay cilmiga bayoolajiyadeena guduhu ay isku dheelitiran yihiin, maskaxdeenna caqliga lihi waxay isku dayaan inay tarjumaan waxa socda iyada oo ku saleysan khibradi hore. Dopamine hooseeya iyo yaraanta dareemayaasha kale ee la xiriira waxay soo saari karaan dareeno xun. Waxaa ka mid ah caajiska, gaajada, walbahaarka, daalka, tabarta yar, xanaaqa, damaca, jahwareerka, keli ahaanta iyo welwelka. Sida aan 'u tarjunno' dareemadeena iyo sababaha suurta galka ah ee dhibaatada, waxay saameyneysaa hab dhaqankeena. Maaha ilaa ay dadku ka joojiyaan khaniisiinta inay gartaan in dhaqankooda uu sababay dayac badan noloshooda.
Waxaan inta badan raadinaa inaan iskaa u daaweyno dareenka xun ee aan ka helno waxyaabaha aan u jecel nahay ama dabeecaddeenna. Waxaannu tan u samaynnaa annaga oo aan ogeyn in ay suuragal tahay in si xad dhaaf ah looga gudbo dhaqankaas ama walaxda kicisay dareenka hooseeya meesha ugu horeysa. Saamaynta isugeynta waa dib-u-soocelinta neerfaha. Iskodland gudaheeda, dadka khamriga cabba ee la il daran cabitaanka maalinta xigta badiyaa waxay isticmaalaan muuqaal caan ah. Waxay ka hadlayaan qaadashada “timaha eeyga ku qaniino”. Taasi micnaheedu waa inay haystaan ​​cabitaan kale. Nasiib darrose dadka qaar, tani waxay kuu horseedi kartaa wareegga xun ee caajiska, diiqadda, qaniinyada, niyad-jabka iyo wixii la mid ah.
Muuqaal aad u badan…
Saamaynta daawashada aad u badan, kacsiyada si kicinta leh waxay u horseedi kartaa isku-buuq iyo calaamadaha niyadjabka. Way adkaan kartaa in la arko sida cunitaanka porn-ka iyo isticmaalidda dawooyinka ay saameyn weyn oo isku mid ah ugu yeelan karaan maskaxda, laakiin way ku dhacdaa. Maskaxda ayaa ka jawaabeysa kicinta, kiimikada ama haddii kale. Saameyntu kuma joogsato si wax loo riixo si kastaba ha noqotee. Kordhinta joogtada ah ee maadadan waxay soosaari kartaa isbeddelo maskaxda ah oo leh saameyn ay kujiraan waxyaabaha soo socda:
Cilmi baaris ayaa muujineysa in cunista qaawan ay la shaqeyso a la'aanta balan qaadka qofka raaxaysta ah. Inaad la qabsato cusbooneysiinta joogtada ah iyo heerarka sii kordhaya ee kacsiga ee ay bixiso galmada iyo fikirka ah inuu jiri doono qof weligiis 'ka sii kulul' fiidiyaha soo socda, waxay ka dhigan tahay in maskaxdooda aysan mar dambe kicin wada-hawlgalayaasha nolosha dhabta ah. Waxay joojin kartaa dadka doonaya inay maalgashadaan horumarinta xiriir nololeed oo dhab ah. Tani waxay murugo u tahay qof walba: ragga maxaa yeelay iyagu kama faa'iideystaan ​​kuleylka iyo isdhexgalka xiriirka nolosha dhabta ahi keenayo; iyo dumarka, maxaa yeelay wax xoojin ah oo la isku qurxiyo ma hayn karto nin xiiseynaya maskaxdiisa oo xaaladdeeda loo baahan yahay inay u baahan tahay sheeko cusub iyo heerar aan dabiici ahayn oo kicinta ah Waa xaalad aan guuleysan.
Dhakhaatiirta daaweyntu sidoo kale waxay arkayaan kor u kac weyn oo ku yimaada dadka raadinaya caawinaada qabatinka barnaamijyada shukaansi. Ballanqaadka beenta ah ee had iyo jeer wax ka sii fiican iyadoo la adeegsanayo riix-riixa xiga ama swipe, wuxuu joojiyaa dadka diiradda saaraya in ay bartaan qof keliya.
Daraasad lagu sameeyay ragga da'da jaamacadda ah, Dhibaatooyin xagga shaqada bulshada kordhay sida isticmaalka suuqyada oo kor u kacay. Tani waxay quseysaa dhibaatooyinka nafsiga ah sida niyad-jabka, walaaca, walbahaarka iyo shaqada bulshada oo yaraatay.
• Daraasad ku saabsan ragga Korean ee aqoonta leh ee ku jira 20s doorbidista isticmaalka qaawan si loo gaaro oo loo joogteeyo farxadda galmada. Waxay u arkeen inay ka xiiso badan tahay inay galmo la yeeshaan wehel.
Isticmaalka sawirka qaawan ayaa si tijaabo ah loo tusay hoos u dhigaan kartida shakhsiyadeed ee dib-u-dajinta dalbashada qiimaha mustaqbalka ee mustaqbalka. Si kale haddii loo dhigo, daawashada filimka waxay ka dhigeysaa mid caqli gal ah isla markaana aad u yar awoodid inaad qaadato go'aanno si cad ugu jira danahaaga sida sameynta shaqada guriga iyo barashada marka hore halkii aad naftaada u madadaalin lahayd. Ku dhig abaalgudka inta aan la gaarin dadaalka.
• Daraasad ku saabsan wiilasha sannadka ee 14, heerarka sare ee isticmaalka pornography internet wuxuu horseeday a halista hoos u dhaca waxqabadka waxbarashada, oo leh saameyn la arki karo lix bilood ka dib.
Inta badan ee ninku daawado…
Markii ay badan tahay fal galmo ninku uu daawado, ayay u badan tahay inuu isticmaalo isticmaalkiisa galmada. Waxay isaga siin kartaa rabitaan ah in ay wax ka qabtaan qoraallada porno la socoshiisa, si ula kac ah u gali sawirada filimada sawirada inta lagu guda jiro galmada si loo ilaaliyo jimicsiga. Tani waxay sidoo kale keeneysaa walaac ku saabsan qaabkiisa galmada iyo muuqaalka jirka. Dheeraad ah, isticmaalka daroogada sare ee sarreysa ayaa si xun loola xiriiriyay inuu ku raaxaysto dabeecadaha isdaba-joogga ah ee galmada la leh lamaane.
Rabitaan Galmo Yar
Hal daraasad, ardayda dhammaadka dugsiga sare waxay ku warbixiyeen xiriir adag oo ka dhexeeya heerarka sare ee isticmaalka sawirada rabitaan galmo oo hooseeya. Qayb ka mid ah macaamiisha caadiga ah ee kooxdani waxay soo tebiyeen jawaab galmo aan caadi ahayn.
• Daraasadda 2008 ee Galmada ku jirta France waxay ogaadeen in 20% dadka ragga 18-24 "aysan daneyneyn galmada ama waxqabadka galmada". Tani waa arrin aad u badan marka la eego farqiga qaranka Faransiiska.
• Japan gudaheeda 2010: dowlad rasmi ah sahan waxay ogaadeen in 36% ragga da'doodu tahay 16-19 "wax danbi ah kuma laha jinsiga ama ay ka soo horjeedaan". Waxay jecel yihiin caruusadaha farsamada ama anime.
Morphing dhadhanka galmada…
Dadka qaar, waxaa dhici karta in aan la filayn Naqshadaynta dhadhanka jinsiga kuwaas oo ka noqda markay joojiyaan isticmaalka porn. Halkan mawduuca waa dadka tooska ah u daawanaya qaniisyada khaniisiinta, waxay jecel yihiin daawashada filimmo toos ah iyo waxyaabo badan oo kala duwanaansho ah. Dadka qaarkiis waxay sidoo kale horumariyaan ubaxyada iyo xiisaha waxyaalaha galmada ka fog hanuunkooda galmada ee dabiiciga ah. Dhib malahan waxa hanuunkeena ama aqoonsiga galmadu yahay, isticmaalka xad dhaafka ah ee qaawan ee internetka waxay sababi kartaa isbedelo culus maskaxda. Waxay bedeshaa qaab dhismeedka maskaxda iyo shaqeynta labadaba. Maaddaama qof walba uu yahay mid gaar ah, ma fududa in la yiraahdo inta u le’ekahay ee ku habboon raaxada raaxada oo keliya ka hor inta uusan bilaabin in uu isbeddelo keeno. Beddelka dhadhanka galmada waa calaamad, si kastaba ha noqotee, isbeddelada maskaxda. Qof walba maskaxdiisa si kala duwan ayey u falcelin doontaa.
Qeybtaan ka fiirso Goynta Porn caawimo badan iyo talooyin.
Isku dheelitirnaan & isu dheelitir la'aan Saamaynta Jirka >>